Ny fanasin'ny tany
"Hianareo no fanasin'ny tany; fa raha ny fanasina no tonga matsatso, inona indray no hahasira azy? Tsy misy heriny hanaovana na inona na inona intsony izy, fa hariana any ivelany ka ho hitsahin'ny olona" . Matio 5:13
Hiasa miaraka amin'ny fiangonana Andriamanitra, fa tsy hiasa irery tsy akory. Ho an'ny tsirairay avy aminareo izay nanandrana ny hatsaran'ny Tenin'Andriamantra dia "Aoka hazava eo imason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo, mba hahitany ny asa soa ataonareo ka hankalazany ny Rainareo Izay any an-danitra" Mat. 5: 16. Hoy Jesôsy : inona intsony Izy, "Hianareo no fanasin'ny tany; fa raha ny fanasina no tonga matsatso, inona indray no hahasira azy? Tsy misy heriny hanaovana na inona na inona intsony izy, fa hariana any velany ka hohitsahin'ny olona". Ny fanasina mahavonjy,ny tsiro, omen'ny Kristianina dia ny fitiavan'i Jesôsy ao am-po, fahamarinan'i Kristy manenika ny fanahy. Raha te hihazona ny herin'ny finoany mahavonjy ny mpampianatra ny fivavahana, dia tsy maintsy mihazona ny fahamarinana eo anoloany sy ny voninahitr'Andriamanitra ao aoriany. Ary hiseho eo amin'ny fiainany sy ny toetrany ny herin'i Kristy. Rehefa mankeo amin'ny vavahady misy perila isika ka miditra ny tananan'Andriamanitra, hisy hanenina ve izay miditra ao, satria nanolotra ny fiainany manontolo an'i Jesôsy? Aoka ho tia Azy amin'ny fitiavana tsy mizarazara isika, ary hiara-miasa amin'ireo anjelin'ny lanitra, mba ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra,ary rehefa miray amin'ny fomban'Andriamanitra, dia afaka ny hizara an'i Kristy amin'ny hafa. Aoka ho vita batisa amin'ny Fanahy Masina! Aoka hanazava ny efitrefitry ny saina sy ny fo ny tara-pahazavana mamirapiratra avy amin'ny Masoandron'ny fahamarinana, voazera sy voaroaka any ivelan'ny tempolin'ny fanahy ny sampy rehetra. Aoka hivaha ny lelantsika ka hilaza ny hatsarany sy hanambara ny heriny!
Raha manaiky ny antson'i Jesôsy ianao, dia tsy ho very an-javony ny hery miasa mangina avy amin'ny hatsaran'i Kristy sy ny herin' ny fahasoavany eo amin'ny hafa. Andeha hibanjina Azy isika ary hovana ho tahaka ny endriny Izay itoeran'ny fahafenoan'ny fomban'Andriamanitra rehetra, ary hahatsapa fa ekena ao amin'llay Zanaka Malalany, "tanteraka ao aminy, sady Izy no Lohan'ny fanapahana sy ny fahefana rehetra" - Kôl. 2:10.